सुन मुल्य तोलाको ८० हजार नजिक पुग्यो ! - Shikhar Post Shikhar Post
सुन मुल्य तोलाको ८० हजार नजिक पुग्यो !
काठमाडौं – सुन मुल्य आज तोलामा ७ सय रुपैयाँले बढेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावका कारण उकालो लाग्दै गएको सुन छापावाला तोलमा आज हिजो भन्दा ७ सय रुपैयाँ बढेर ७८ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएको छ।
यो अहिले सम्मकै उच्च हो। तेजावी सुन तोला ७८ हजार ५ सय र चाँदी ९ सय २० रुपैयाँ केजीमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
मूल्य आकाशिएपछि नेपाली बजारमा सुनको बिक्री ह्वात्तै घटेको छ ।
प्रकाशित मिति : आईतवार, ११ फाल्गुन २०७६ १२:४८